Xirfadlayaal Caafimaadka Haweenka | Dhaqanka Asturnaanta
Waad ku mahadsantahay inaad noo dooratay sidii bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga. Waxaa naga go'an inaan ku siinno daryeelka caafimaad ee ugu fiican. Fahamkaaga cad ee ku dhaqanka dhaqankeena siyaasada maaliyadeed wuxuu muhiim u yahay xiriirkeena xirfadeed. Waxaan sameynaa dadaal kasta si aan u ilaalino khidmadaheena kuwo macquul ah isla markaana isla mar ahaantaana daboosho kharashka adeegyada aan bixinno. Bixinta biilkaaga waxaa loo tixgeliyaa inay qayb ka tahay daaweyntaada guud. Si kharashka daryeelka caafimaad loogu ilaaliyo ugu yaraan, waxaan qaadanay siyaasadaha soo socda.
Lacagta iyo Lacagaha
Khidmaddu waa heer waxayna ku saleysan tahay kakanaanta booqashadaada. Bixinta oo buuxda ayaa loo baahan yahay waqtiga booqashadaada waxaana lagu sameyn karaa lacag caddaan ah, jeeg shaqsiyeed, amar lacag, Visa, MasterCard, ama Discover.
Bixinta wada-bixinta Caymiska waxaa la bixinayaa waqtiga adeegga. Biil kama soo diri doonno caymiskaaga labaad kharashyada. Haddii aadan awoodin inaad ku bixiso wada-bixintaada booqashadaada, ballantaadu waxay u baahan kartaa dib-u-dhigis. Haddii ay daruuri tahay in lagu arko, $ 25.00 Lacag Bixinta Adeegga ayaa lagu dari doonaa koontadaada
In kasta oo, xareynta sheegashooyinka caymiska ay tahay xushmad aan u fidinno bukaannadeenna, dhammaan kharashyada ayaa ah mas'uuliyaddaada laga bilaabo taariikhda adeegyada la bixiyay. Caymiskaagu waa heshiis u dhexeeya adiga, loo shaqeeyahaaga iyo shirkadda caymiska, annagu qayb kama nihin heshiiskaas. Booqashadaada kahor, laxiriir shirkaddaada caymiska si aad u xaqiijiso inaan kaqeybqaadano qorshahaaga, iyo in adeegyada aad damacsantahay inaad hesho ay daboolan yihiin. Si aan u xareyno dalab, waa inaad soo bandhigtaa nuqul HADA AH ee caymiskaaga booqasho kasta oo aad ku soo gudbiso wixii isbeddel ah ee ku saabsan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Dhammaan adeegyadu maaha faa'iidooyin daboolan dhammaan siyaasadaha, sidaa darteed aad ayey muhiim u tahay inaad fahamto qodobbada siyaasaddaada shaqsiyeed. Shirkadaha caymiska waxay doortaan adeegyo caymis ah oo aysan dabooli doonin, sidaa darteed dammaanad kama qaadi karno bixinta dhammaan sheegashooyinka shirkaddaada caymiska. Qaar ka mid ah tusaalooyinka guud ee adeegyada aan la daboolin waa ka hortagga uurka iyo dhalmo la'aanta. Intaa waxaa sii dheer, qorshayaasha qaarkood ma daboolaan adeegyada kahortagga ama umusha. Dhimista ama diidmada dalabkaaga kaa dhaafi meyso mas'uuliyaddaada dhaqaale.
FADLAN OGOW: Booqasho kasta waxaa lagu diiwaangeliyaa diiwaankaaga caafimaad waxaana ogaanaya bixiyaha. Baadhitaannada waxaa lagu sameeyaa iyada oo ku saleysan macluumaadka caafimaadka, oo aan ku saleysneyn caymiska Shirkadaha Caymiska. Inaad codsato beddelka cudurka kaliya ujeeddadu tahay inaad magdhow ka bixiso shirkadda caymiska waa mid aan habboonayn waxaana loo tixgeliyaa khayaanada caymiska.
Waxaa looga baahan yahay Goob-gal
Hubi Macluumaadka Xiriirka Shaqsiyeed
Kaadhka imika ee Kaadhka Caymiska
Soo Bandhig Aqoonsiga Sawirka Hadda
Bixinta Lacag kasta oo Miisaan ah
Bixinta Booqashada Maanta
Waxaan xaqiijin doonaa caymiskaaga booqasho kasta. Haddii aanaan awoodin inaan sidaas yeelno, waxaa lagugu tixgelin doonaa is-bixin aadna mas'uul ka noqon doonto booqashadaada.
Si wax looga qabto baahiyaha bukaannadeenna aan caymiska lahayn iyo bukaannada leh xaddidaadaha caymiska, waxaan bixinnaa qiimo dhimis 40% ah oo ka mid ah ajuuradayada caadiga ah. Qiima dhimistani waxay qireysaa qiimaha hoose ee ku lug leh biilasha iyo aruurinta marka dalabku aanu u baahnayn in loo gudbiyo bixiye saddexaad. Si aad ugu qalanto, lacag bixinta ayaa loo baahan yahay in LAGU DHAMMO kahor ama dhamaadka booqashadaada ama nidaamka. Hadhaaga hadhay uma qalmo dhimis. Qiimo-dhimistaani waxay khuseysaa dhammaan adeegyada dhexe ee la bixiyo waxaana la bixiyaa oo keliya waqtiga adeegga. Nidaamkani ma khuseeyo eedeymaha kala duwan ama la tashiga nuujinta.
Medicare iyo Medicaid
Waxaan si farxad leh u aqbalnaa bukaanka Medicare-ka waxaanan ku soo dallaci doonnaa adeegyadayada heerka la ogol yahay. Xeerarka Medicare waxay u baahan yihiin inaad saxeexdo Ogeysiiska Ka-faa'iideystaha Sare (ABN) booqasho kasta oo aad booqato. Foomkani wuxuu kaa caawinayaa inaad sharraxdo adeegyada Medicare ee aan daboolin oo laga yaabo inay mas'uul ka tahay adiga. Shaqada shaybaarku waxay u baahan doontaa saxeex gaar ah oo ABN ah.
Waxaan si farxad leh u aqbalnaa bukaannada qaba Medicaid, Molina iyo Caresource sidoo kale. Kaarkaaga hadda waa in la soo bandhigaa booqasho kasta. Sababtoo ah isbeddelada ugu dambeeyay ee siyaasadaha Medicaid ee gobolka, bukaanada waxaa loo kala wareejin karaa saddexda bixiyeyaasha bil ka bil. WAA XILKAAGA IN AAD KA SOO BADHISO MACLUUMAADKA Xilligan socda booqasho kasta.
Imtixaanno sanadle ah iyo Mammography
Fadlan xaqiiji in caymiskaagu uu daboolayo adeegyadan kahortaga kahor ballantaada. Waxay kuxirantahay da'daada iyo qorshaha, adeegyadan waxaa laga yaabaa inaan la daboolin. Sidoo kale, shirkadaha caymiska qaar ayaa aad ugu adag fulinta waqtiga xaddidan inta udhaxeysa booqashooyinka lagamana yaabo inay daboolaan booqashadaada xitaa haddii aad xitaa hal maalin hore tahay.
Sharciga Fasaxa Caafimaadka Qoyska iyo warqadaha Naafada
Haddii loo-shaqeeyahaagu u baahan yahay Sharciga Fasaxa Caafimaadka Qoyska (FMLA) ama waraaqaha Naafada oo ay ku buuxiyaan adeeg bixiyahaagu, waxaan ku siinaynaa laba ikhtiyaar.
Foom ay abuurtay dhaqankeennu oo buuxinaya baahiyaha loo shaqeeyaha iyo bukaanka. Bukaanku waxay codsan karaan foomkan in la buuxiyo waqti kasta si loo caddeeyo xaaladdooda hadda. Waqtiga ku-soo-celinta foomkan waa 5 -7 maalmood oo shaqo oo wax lacag ah kama bixinayso tan.
Foomamka si toos ah uga socda loo shaqeeyahaaga oo u baahan macluumaad dheeri ah waxay qaadataa waqti aad u dheer oo ay shaqaaluhu ku dhammaystiraan. Waxaan ku faraxsanahay inaan kuu dhameystirno foomamkan; si kastaba ha noqotee waxaa jira soo-noqoshada maalinta ganacsiga 5-7 iyo lacag dhan $ 25.00, oo horay loo bixin karo.
Si aan ugu hogaansano sharciga Gobolka Ohio iyo qawaaniinta HIPAA, waxaan kugu soo dallaceynaa halkii bog, oo horay loo bixin doonaa, haddii aad rabto nuqul ka mid ah diiwaanadaada oo laguu soo diro adiga ama dhakhtar kale. Nidaamkan khidmadda khidmadda bogga ayaa la heli karaa markii la codsado. Sida had iyo jeer ah, haddii takhtar iskaashi (daryeelka koowaad ama takhasusle) codsado qaybo ka mid ah diiwaankaaga si uu kaaga caawiyo daryeelkaaga, wax lacag ah lagama qaadayo.
Dhalmada iyo Qalliinka
Waxaan leenahay siyaasado gooni ah oo loo heli karo adeegyada dhalmada iyo qalliinka. Waxaa lagu siin doonaa siyaasadahaan haddii daryeelkaagu kuu oggolaado.
Dacwado kala duwan
Soo Celinta Kharashka -– Jeegagga aan ku filnayn (NSF) waxaa lagu soo rogi doonaa $ 25.00 lacag ah (marka lagu daro ujrada bangigaaga).
Lacag aruurinta --– Xisaabaadka aan lagu bixin muddo 60 maalmood gudahood ah laga bilaabo taariikhda la qabtay ayaa loo diri karaa wakaaladda Uruurinta Dibadda oo lagu wargalin karaa Xafiiska Deynta. Marka lagu daro isu-dheelitirnaantaada taagan, 33% dheeraad ah ayaa lagu dari karaa si loo daboolo kharashyadayada. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagaa saari karaa xarunta tababarka.
Eedaynta Shaybaarka --– Waxay kuxirantahay caymiskaaga, waxaad heli kartaa biil ka duwan xarunta sheybaarka ee qabta shaqada shaybaarkaaga. Kharashyadan waa in si toos ah loogala hadlaa xarunta sheybaarka.
Soo Celinta Bukaanka waxaa laga shaqeeyaa Arbacada ugu dambeysa bisha. Akoon kasta oo leh sheegashooyin taagan uma qalmi doono lacag celin.
Waxaan qandaraas kula jirnaa qaar ka mid ah Shirkadaha Caymiska si aan uga qaadno khidmadda xarunta howlaha habraaca ka socda xafiiskayaga. Tani waxay ka dhigan tahay in laba biilal oo kala duwan loo gudbin doono Shirkaddaada Caymiska isla taariikhdaas. Heshiiska aan la galeyno caymiskaaga wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka qaadno qiimayaal ka hooseeya kan markaas Isbitaalada taas oo gacan ka geysaneysa in qiimahaaga caymiska uu ka hooseeyo. Nidaamyada oo dhan lama oggola, laakiin waa lagu soo ogeysiin doonaa haddii khidmadda Xarunta la soo dallaco.
Siyaasadaha Dhaqaalaha ee OB